TOP NEWS-Mid kamid ah wasiirada cusub ee xukuumadda RW Khayre oo si deg deg ah xil u baneeyey. – Puntland News.net
Home 2017 April 20 Somali News TOP NEWS-Mid kamid ah wasiirada cusub ee xukuumadda RW Khayre oo si deg deg ah xil u baneeyey.
TOP NEWS-Mid kamid ah wasiirada cusub ee xukuumadda RW Khayre oo si deg deg ah xil u baneeyey.
April 20, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
afiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya, haatanna ah Wasiirka Qosheynta, Maalgashigga iyo Horrumarinta dhaqaalaha ee xukuumada Somalia Jamaal Maxamed Xasan ayaa xilka safiirnimo si KMG ah ugu wareejiyay qunsulka safaaradda Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, ka dib munaasabad lagu qabtay xarrunta safaaradda.
Ku-simaha safiirka ahna qunsulka safaaradda Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo isna goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay Danjire Jamaal, isagoo ku ammaanay wax qabad mudadii uu xilka safariinimo hayay.